2018 တရုတ်ရော်ဘာစက်ယန္တရားဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - တရုတ် Qingdao ပုံမှစက်
ယင်း 2016 ခုနှစ်တွင်ထွက်အောက်ခြေကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရော်ဘာစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းကို double-ဂဏန်းအရောင်းဝင်ငွေအတွက်ကြီးထွားမှု, ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးများနှင့်ကော်ပိုရိတ်အမြတ်အစွန်းအတွက်သိသိသာသာတိုးနှင့်အတူ 2017 ခုနှစ်တွင်တိုးတက်လာဖို့ဆက်ပြောသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းအဆိုအရ, ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားယာကုမ္ပဏီများသည်တက်ကြွစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြပြီး, ရာဘာစက်ပစ္စည်းများအတွက်ဝယ်လိုအား, အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောတိကျအသိဉာဏ်ရော်ဘာစက်ယန္တရား, တိုးတက်လာနေသည်။ ဒါဟာ 2018. အတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရော်ဘာစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းတရားဝင်အထက်သို့ရုပ်သံလိုင်းဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
ရော်ဘာစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ '' အရောင်းဝင်ငွေသိသိသာသာတိုးလာ
သည့်တလွှား, 2017 ခုနှစ်, တရုတ်ဓာတုပစ္စည်းအသင်းရော်ဘာစက်ယန္တရားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဝင်များ၏စာရင်းဇယားများအရ 24 အဓိကရော်ဘာစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ တိုင်းပြည် 7,735 ယွမ်ဘီလျံ, 11.3% တစ်ခုတိုးလာ၏ရောင်းအားဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, 2017 ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရော်ဘာစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းစုစုပေါင်းရောင်းအားဝင်ငွေ 10,65 ဘီလျံယွမ်, 10.9% တစ်ခုတိုးရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ ဒါဟာ 2015 ခုနှစ်ကတည်းကစက်မှုလုပ်ငန်းရောင်းအားဝင်ငွေအတွက်ပထမနှစ်တွင်-on-တစ်နှစ်တိုးဖြစ်ပါတယ်
2017 ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏ရော်ဘာစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများများ၏ခြုံငုံလည်ပတ်မှုနှုန်းကိုအတော်လေးမြင့်မားသောကြီးနှင့်အများဆုံးလုပ်ငန်းတွေများ၏ရောင်းအားဝင်ငွေတိုးတက်လာခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူ 24 ကုမ္ပဏီများအကြားတွင်, 15 ရောင်းအားဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှုန်း 8 ကျဆင်းမှုရှိခဲ့ကြသည်, ထိပ်ဆုံး 10 ရောင်းအားင်ငွေစုစုပေါင်းရောင်းအားဝင်ငွေ 61,4% များအတွက်စာရင်းကိုင်, 6,54 ယွမ်ဘီလျံ ရှိ. , စက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစူးစိုက်မှု 0.7% အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ခွန်အားတိုးပွါး။
ရောင်းအားဝင်ငွေသိသိသာသာကြီးထွားအောင်မြင်ထားပြီးမသာပေမယ့်တရုတ်ရဲ့ရော်ဘာစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းများအမြတ်အစွန်းလည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် 2017 ခုနှစ်သိသိသာသာတိုးလာခဲ့ကြောင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြတ်အစွန်းသိသာစွာတိုးပွားလာခဲ့သည်။
ဒါဟာ 24 ရော်ဘာစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများအားလုံးအပြုသဘောအမြတ်အစွန်းလုပ်နေပါတယ်နှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးတက်မှုနှုန်းလုပ်ငန်းများအများစုများအတွက်အကောင့်ကိုနားလည်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်, စာရင်းရော်ဘာစက်ယန္တရားကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမြတ်အစွန်းသိသာစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ 2016 ထဲမှာ 770 သန်းယွမ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းနေစဉ်ဥပမာအားဖြင့်, 2017 ခုနှစ်, ကုမ္ပဏီနီးပါး 93 သန်းယွမ်တစ်အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသပ်သူများအဆိုအရ, အမြတ်ကြီးထွားမှုအတွက်မောင်းနှင်အားအဓိကအားဖြင့်အမိန့်ထဲမှာတိုးနှင့်ထုတ်ကုန်စုစုပေါင်းရဲ့ margin ၏တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အမြတ်အစွန်းကိုလျှော့ချထားပြီးဖြစ်သောကုန်ကြမ်းများစျေးနှုန်းသိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။
စာရင်းများအရ 2017 ခုနှစ်, တရုတ် 24 ရော်ဘာစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများများ၏ပြည်ပပို့ကုန်ပေးပို့တန်ဖိုးကို 1,836 ယွမ်ဘီလျံ, ထ 32.3% တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, ကတရုတ်ရဲ့ရော်ဘာစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းစုစုပေါင်းပို့ကုန်တန်ဖိုး 2017 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန် 20% ၏တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်တိုး $ 360 သန်းကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ခန့်မှန်း
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသပ်သူများအဆိုအရတင်ပို့မှုကနေနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုင်ငွေများ၏ကြီးထွားမှုကိုအဓိကအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံယာကုမ္ပဏီများသည်အမေရိကန် "နှစ်ဆအတိုက်အခံ" ကိုတုန့်ပြန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိတာယာစက်ရုံများထူထောင်ကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရော်ဘာစက်ပစ္စည်းများအတွက်ဝယ်လိုအားသေးငယ်တဲ့ထှတျအထိပျကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ, ပင်လယ်ရပ်ခြားစက်ရုံများတည်ဆောက်ရန်တရုတ်နိုင်ငံယာကုမ္ပဏီတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုချဉ်ပေါက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ပဏာမစာရင်းများအရထက်ပိုမို 10 ယာစီမံကိန်းများကိုစတင်သို့မဟုတ်စတင်ရန်စီစဉ်နေကြသည်။ ထို့အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာစျေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတည်ငြိမ်သည်, ထို့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိရော်ဘာစက်ပစ္စည်းများတင်ပို့များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးသားထားပါတယ်ထားတဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် Bridgestone တွင်ပိုမိုတာယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ, ရှိပါတယ်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းတရုတ်နိုင်ငံ၏ရော်ဘာစက်ယန္တရားတင်ပို့မှု 2018 ခုနှစ်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်များနှင့် internationalization ရ၏ဘွဲ့ထပ်မံတိုးတက်ပါလိမ့်မည်။
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-24-2018